WARARKA BEENTA AH EE XILIGANI WAA DAMBI WEYN OO U BAAHAN IN LAGA TAXATIRO – hogaanka.org
Sh.Dirir oo ina baraarujinaya
WARARKA BEENTA AH EE XILIGANI WAA DAMBI WEYN OO U BAAHAN IN LAGA TAXATIRO
Sideeda been abuurku waa dembi weyn oo aan diinteenu ogoleyn Allah (swt) inooga digey.
Xiligan oo Caalamka oo dhanba la tacaalayo ka hor taga iyo daaweynta Xanuunka COVID -19 ayaa dhinaca kale dad badan oo xilkasnimadoodu hooseysaa shaqo ka dhigteen iney dadka ku musquuliyaan faafinta warar been ah oo dhinacyo badan leh oo ku aadan cudurkan COVID-19 ka .
Wararkani waxay khalkhal iyo Jahawareer ku ridayaan dadka oo waxay khalkhal gelinayaan wararkii runta ku saleysnaa ee ku saabsanaa cudurka ee ka soo baxayey ilaha sax da ah sida haydaha dawladaha u qaabilsan caafimaadka,kuwa wacyi gelinta,ururka WHO iyo xitaa dadka ka shaqeenaya hawlaha logu joojinayo fiditaanka cudurkan.
Sidaa awgeed waxaa haboon in dadkaasi joojiyaan beenta aaney waxba ka jirin ee lagu qaldayo dadka, dadkana waxaa la gudboon iney warka ka qaataan ilaha sugan ee hadh iyo habeenba u hurdo belay ka haqabtirka wararka saxa ah iyo xaalada saxda ah ee uu cudurku marayo markastaba sida ururka WHO iyo Wasaaradaha Caafimaadka ee dalalka Caalamka ee lagu kalsoon yahay warbixinadooda.
Dadka Somaliyeed waxaa la gudboon inay wakhtigan ka digtoonaadaan wararka aan xaqiiqada ahayn ee marxaladan adag dad aan waxba gareynin faafinayaan kagana been sheegayaan xaqiiqada cudurka iyo sida la iska ilaalinkaro waxyeeladii,waxaad xitaa arkeysaa kuwo soo qoraya in dawadiisa dad somaliyeed heleen iyada oo caalamka oo dhan laysku raacsan yahay in aan daawo iyo talaal toona loo hayn ilaa hadana la baadhayo daawadiisa iyo talaalkiisa.
Hadaba iska ilaaliya beenta faafeysan wakhtigan eek u saabsan Cudurkan COVID-19 Wararkii ugu dambeyeyna kala soco websites ka haydaha Caafimaadka ee Caalamka sida WHO iwm.
Been ma sheegto taariikhdu Previous
Sh.Dirir oo ina baraarujinaya Next